Miraha Avocados ayaa la ogaaday inuu waxtar u leeyahay caafimaadka wadnaha, araga… – Hagaag.com
Posted on 3 Abriil 2021 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Avocados ayaa ah miro gaar oo faa’idooyin badan leh iyada oo ay ugu wacan tahay nafaqooyinka muhiimka ah iyo dufanka caafimaadka qaba ee ku jira.
Warbixintan, shabakadda Ruushka “marieclaire” waxay uga hadashay saamaynta fiican ee cunista Avocados maalin kasta uu u leeyahay qofka.
1- Ilaaliyaha qalbiga
Avocado wuxuu ka kooban yahay qayb muhiim ah oo dufanka iskujira ee caafimaadka qaba, kuwaas oo waxtar u leh caafimaadka wadnaha, wuxuu yareeyaa halista wadno xanuunka, wuxuu yareeyaa heerka kalastarolka xun dhiiga ku jira, Ka sokow dufanka aan lagu dhergin, Avocado wuxuu hodan ku yahay antioxidants, taas oo si wax ku ool ah uga hortagta caabuqa iyo walbahaarka oksida, taas oo keenta dhaawaca unugyada sababtoo ah oksaydhka xad-dhaafka ah, ee xididdada dhiigga.
Sida laga soo xigtay Xarunta Federaalka ee Jarmalka ee Nafaqada, Avocados wuxuu leeyahay faa’iidooyin caafimaad oo aad u tiro badan. Maaddaama ay ka shaqeyneyso yareynta heerka kolestaroolka dhiigga ku jira, sidaasna ay u yaraynayso halista cudurka wadnaha.
2- Miisaanka oo yaraada
Qaarkood waxay la yaaban yihiin sida cuntada dufanka badan leh sida Avocado ay kaaga caawin karto inaad miisaankaaga hoos u dhigto, gaar ahaan maadaama dufanka uu yahay sababta ugu weyn ee miisaanka uu ku kordho.
Jawaabtu waxay tahay in Avocado ay kaa caawiso miisaanka oo yaraada, iyada oo ay ku jiraan waxyaabo badan ee ku jira dufanka caafimaadka leh iyo faybarku, maadaama hal xabbo ay ku jiraan ilaa 14 garaam oo faybar ah, taas oo kor u qaadeysa dareenka inaad dheregan tahay; Taas oo yaraynaysa hamiga cunida badan maalintii.
Sida laga soo xigtay Xarunta Dhexe ee Jarmalka, Avocado wuxuu hodan ku yahay fiber-ka cuntada, kaas oo kiciya dheef-shiidka waxayna gacan ka geysaneysaa in la dheereeyo dareenka dheregsanaanta, taas oo yareysa qulqulatooyinka gaajada daran, taas oo door muhiim ah ka qaadata miisaanka oo hoos u dhaca iyo raaxeysiga jir ahaaneed.
3- Aragtida oo wanaajiya
Waxyaabaha ugu badan ee keena arag beelka goor hore ah ayuu hoos u dhigaa isticmaalka Avocado, maadaama ay ka buuxaan nidaam cunno oo isku dheeli tirin.
4- Waxtar ayuu u leeyahay caafimaadka timaha iyo maqaarka
Lutein iyo zeaxanthin ee ku jira Avocado ayaa ka ilaaliya in unugyada waxyeelo soo gaarto, sababo la xiriira shucaaca UV iyo hababka oksidka dhibaatada leh oo ay keenaan. Fallaadhaha UV-ku waxay horseedaan gabowga maqaarka goor hore ah, sidoo kale waxay ka dhigaan timaha daciif iyo kuwo qalalan.
5- Waxaad ka heleysaa kaydad fiitamiin iyo macdan ah
Xarunta Federaalka ee Nafaqada ee Jarmalka ayaa sheegtay in Avocado uu yahay keyd khasnado ah oo fiitamiinno iyo macdano leh; Maaddaama uu hodan ku yahay fiitamiin “B5” (B5), fiitamiin “B6” (B6), fiitamiin “C”, fiitamiin “E” (E) iyo fiitamiin “K” (K), sidoo kale wuxuu hodan ku yahay folic acid iyo potassium, Marka lagu daro magnesium, birta iyo zinc.
6- Yaraynta cudurada
Avocado wuxuu leeyahay faa’iidada ay kujirto asiidh dufan leh sida “oleic acid”, kuwaas oo ahmiyad weyn u leh caafimaadka. Maaddaama ay ka shaqeyneyso yareynta caabuqa, sida laga soo xigtay Xarunta Federaalka ee Jarmalka ee Nafaqada.